Mpitatitra eto an-dRenivohitra : tsy hidina mihitsy ny saran-dalana | NewsMada
«Tokony hidina amin’izay ny saran-dalana amin’ny taxi-be mampitohy ny Renivohitra sy ny toerana manodidina, satria efa intelo nihena ny vidin’ny solika ampiasaina tao anatin’ny telo volana », hoy ny mpitarika ny tambajotra miaro ny zon’ny mpanjifa, Rakotorova Rabetsara na Ralita, omaly. Tokony tsy ho voatery hitovy hatrany koa ny vidin’ny solika amin’ny orinasa mpaninjara telo miasa eto amintsika. Samy manana ny fotoana namandrihana ny solika ny orinasa telo ka rariny raha tsy hitovy ny vidiny eny amin’ny station. Tokony hiditra an-tsehatra amin’izay ny filankevitra momba ny fifaninanana napetraky ny minisiteran’ny Varotra.
« Sarotra sy tsy azo eritreretina mihitsy ny hampidina ny saran-dalana amin’izao fotoana izao », hoy ny filohan’ny kaoperativa misahana ny fitaterana an-dRenivohitra, Andriambinintsolomora Bernardin. Nanapa-kevitra ny hanitsy ny saran-dalana izahay mpitatitra taorian’ny fivoriana ny talata teo ka hevitra ambadika ataon’ny fitondrana hanakanana ny fampiakarana io, araka ny fanazavany. Betsaka amin’ireo mpikambana (25%) ao amin’ny UCTU koa, mbola tsy naharay ny fanampiana avy amin’ny fanjakana momba ny vidin-tsolika. Raha ny tokony ho izy, vokatry ny fidangan’ny vidim-piainana, tokony ho 600 Ar ny saran-dalana amin’ny taxi-be eto an-dRenivohitra.
Ho an’ny mpiandraikitra ny UCTS kosa, mila jeren’ny fanjakana mihitsy ny fampidinana ny haba samihafa takina amin’ny mpitatitra sy ny vidin’ny kojakoja ilaina amin’ny fiara vao mety hiroso amin’ny fampidinana ny saran-dalana ny mpitatitra. « Raha hampidina ny saran-dalana amin’izao fepetra izao izahay mpitatitra, mamono tena ihany », hoy ny fanazavany.